Taonan’ny famindram-po » Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Tag Archive: Taonan’ny famindram-po
Fangatahana ny famindrampon’Andriamanitra iarahana amin’i masimbavy Faustine
Andriamanitra ô, mihoatra noho ny asanao ny famindramponao. Misaotra Anao aho noho ny fahasoavana marobe nomenao ny fanahin’ny mpanomponao, dia i masimbavy Faustine, fa indrindra ny nanehoanao taminy ny famindramponao tsy misy fetra izay te hiparitaka amin’ny fanahy tsirairay avy sy amin’ny taranak’olombelona fadiranovana. Amim-pitokiana lehibe ry Tompo, no angatahiko an’izao aminao : mba ampisehoy ahy …
Tags: Famindrampon'Andriamanitra, Taonan'ny famindram-po
Ry rahalahy sy anabavy, nosokafana teny anivon’ireo katedraly isan- diosezy ny varavarana masina ny alahady 13 desambra farany teo, hahafahan’ireo maro an’isa miaina ny jôbilin’ny famindram-po ary mba ho taratry ny fitiavana sy ny famindram-pon’Andriamanitra eo amin’izao tontolo izao ny Fiangonana. Tsy tokony hijanona ho resabe fotsiny ny famindram-po sy ny famelana fa ho tanteraka …
Tags: Taonan'ny famindram-po
Tags: Taonan'ny famindram-po, vavaka
Hanomboka amin’ny 8 desambra 2015 ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 20 novambra 2016 ny Jôbily manokan’ny famindram-po. « Mpamindra fo tahaka ny Ray », notsoahina tao amin’ny Lk, 6-36, io ny teny ho enti-miaina sy mandalina ity taon-jôbily ity. Entanina isika hiaina ny famindram-po tahaka an’Andriamanitra Ray. Tsy mitsara ary tsy manameloka fa mamindra fo, mizara …